Laydhka Eexda Ayaa Si Fudud Loo Sameeyay - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Laydhka Eexda Oo Fudud Laga Sameeyay
Waxaan leenahay jaantusyo cabbir ah dhammaan bogagga wax soo saarka, laakiin wali waxaa nala weydiinayaa inaan xaqiijino cabirka saxda ah tobaneeyo jeer maalintii. Taas macnaheedu waxa weeye in dadku runti hubsadaan in "sharciyadayada" ay quseeyaan ...
Miyuusan leben ama midab midab leh “burburin” nalalka eexda saxda ah?
Waxaan helnay su'aashan wax badan, waxaanan rabaa inaan aragti ka dhiibto. Marka hore, aan idhaahdo haddii aad tahay fiidiyoow darajayn midab leh, waxaad gabi ahaanba dooneysaa inaad xakameyso inta badan deegaanka aad yeelan karto. Tan waxaa ka mid ah ...
Indhaha Cadaadiska iyo OLED: Runta ayaa ah inay taas ka sii Daran tahay
Haddii aad tahay midab-yaqaan xirfadle ah ama tifaftire fiidiyow ah, waad ogtahay in culeyska indhaha uu xitaa uga sii xumaan karo OLED marka loo eego tikniyoolajiyadaha kale ee muujinta. Laakiin haddii aad kaliya tahay ilaaliyaha TV-ga xiisaha leh, waxaa jira fursad wanaagsan oo aan waligeed dhicin ...
MediaLight 6500K La Dhigay D65: Tayada Tixraaca, ISF-Shahaado La Siiyay D65 Eex Nalalka
Ku rakibidda nalalka saxda ah tiyaatarka gurigaagu maahan inay caqabad noqdaan, laakiin badanaa waa. Marka laga reebo tuubooyinka dhaadheer, oo tiir dhexaad u ahaa sanado, waxaa jiray ikhtiyaarro yar oo soo bandhigay heerka CIE ee saxda ah ...
Abriil 9, 2021
Iftiiminta eexdu waa isha laga helo iftiinka ka soo baxa muuqaalkaaga gadaashiisa, iyadoo la hagaajinayo waxqabadka laga arko TV-gaaga ama kormeerahaaga, iyadoo la siinayo tixraac joogto ah oo loogu talagalay indhahaaga. (Kama hadlayo laydhadhka nalka cusub ee midabada leh ee leexda ...